တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်နှင့်စကိတ်စီးသံခမောက်လုံးအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ? - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
လူတွေဖြစ်ပါတယ်မေးဖို့ရာတစ်ဦးကဘုံမေးခွန်းဆိုင်ကယ်နှင့်စကိတ်စီးခမောက်နည်းလမ်းများစွာအတွက်အမှန်တကယ် function ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်အပြင်ရူပအတွက်သိသာခြားနားချက်ကနေ "အဘယျနညျးတစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်နှင့်စကိတ်စီးသံခမောက်လုံးအကြားခြားနားချက်ရဲ့" သင်လျှင်သေချာအောင်ချင်ပါတယ် သင့်ရဲ့စီးဘို့သံခမောက်လုံး၏ညာဘက် type ကိုမဝယ် လျှပ်စစ်စကိတ်စီး .
သငျသညျပုံမှန်ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်နှင့်သင့်ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောကိုကာကွယ်ရန်ရေးဆွဲထားတစျခုအကြားလွှမ်းခြုံအတွက်ခြားနားချက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ Image ကိုအကြွေး: အဆိုပါ Sweethome
စက်ဘီးခမောက်နှင့်စကိတ်စီးခမောက်အကြားတစျခုမှာအဓိကကွာခြားချက်ကသူတို့ရဲ့ကွဲပြားဒီဇိုင်းများမှအမှန်တကယ်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာပတ်ပတ်လည်နှင့်ချောမွေ့သောစကိတ်ခမောက်, သင်၏ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောကိုဖုံးလွှမ်း။ သူတို့ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောအပေါ်ဆင်းသက်စေခြင်းငှါ, ဘယ်မှာစကိတ်သမားတွေအကြောင်းကိုလေ့ယူရေတံခွန်, ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, biker ခဲသူတို့ရဲ့စက်ဘီး၏နောက်ကျော၏ကျလိမ့်မည်။
တစ်ဘို့ လျှပ်စစ်စကိတ် , ငါမနေတဲ့အစဉ်အလာစကိတ်စီးသံခမောက်လုံးကဲ့သို့သင်၏ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောဖုံးသောတစ်ဦးထုပ်ရတဲ့အကြံပြုလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အလျင်အမြန်အရှိန်မြှင့်ရန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကြောင့်, သင်လျှောက်ထားပါတယ်ရှိန်ကိုဘယ်လောက် misjudge လျှင်, သင်နောက်ပြန်ချွတ်ချပစ်နှင့်နိုငျသညျ။
ပုံမှန်စကိတ်စီးသံခမောက်လုံးနှင့်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်အကြားအခြားအဓိကခြားနားချက်သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးရန်စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရာ non-certified ရရှိထားပြီး, စကိတ်စီးခမောက်မျိုးစုံသေးငယ်တဲ့သက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်တဲ့ပျော့ပြောင်းပြီးအမြှုပ် shell ကိုနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြတဲ့ဆိုင်ကယ်သံခမောက်လုံးကိုသင်သံခမောက်လုံးကိုအစားထိုးဖို့လိုအပ်သည့်ပြီးနောက်, တဦးတည်းကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ယူ. ချိုးဖျက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲသည် EPS အမြှုပ်များထွက်ကိုဖန်ဆင်းသည်။
ပုံမှန်စကိတ်နှင့်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရိုးရာစကိတ်စီးခမောက်သော်လည်း, လျှပ်စစ် longboards မကြာခဏအသိအမှတ်ပြုကြသည်မဟုတ်, သငျသညျရှိပါတယ်တဲ့ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်, ထိုနေဆဲသင်၏ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောကိုကာကွယ်ပေးသည်အတူတူပင်ခဲယဉ်းသည် EPS မြှုပ်အသုံးပြုတဲ့စကိတ်စီးသံခမောက်လုံးရသင့်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူခမောက်သူတို့ certified ရရှိထားပြီး CPSC ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်ဖွငျ့ဤလမ်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲလျက်ရှိသည်စကိတ်စီးရသောပြောပြနိုင်ပါတယ်။
ငါသည်ငါ့ဦးထုပ်လမ်းညွှန်ထဲမှာစာရင်းဝင်ဖူးတဲ့ခမောက်အားလုံးသည် CPSC သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းနှင့်သင့်ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောကိုကာကွယ်ပေးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လည်းသင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောကိုကာကွယ်ပေးသည်တဲ့သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းဦးထုပ်များသေချာအဖြစ်, သင်သည်သင်၏အပေါ်အများကြီးပိုလုံခြုံပါလိမ့်မည် လျှပ်စစ် skateboar ဃ.
အချိန် post: ဒီဇင်ဘာ-11-2017